Mhando yetsika: Kune zvinyorwa zvevakadzi here? Uye murume? | Zvazvino Zvinyorwa
Zvinyorwa sekuratidzwa kwetsika, zvinopfuura zvevakadzi, dzinza, zera uye chinzvimbo munharaunda.
Mumakore achangopfuura, iyo echikadzi mabhuku echinyorwa, pasina kwese kwatinowana tsananguro kana pfungwa inotitaurira zvavanoreva. Chii chiri chechokwadi ndechekuti zvakapa kumuka kumibvunzo yakawanda mukubvunzurudzwa nevanyori, yakazara pfungwa zvinyorwa uye hurukuro zhinji.
Ichi chinyorwa kuedza nzwisisa zvaunoreva ichi chitaera uye boka mhedzisiro yechikamu ichi.
1 Yekushambadzira Kushambadzira
2 Zvinonaka maererano nechikadzi
3 Zvinyorwa neMunyori
4 Zvinyorwa ne protagonist
5 Zvinyorwa nenyaya
Pakutanga, tinogona kufunga kuti zvinyorwa zvevakadzi ndezve izvo zvakanangana nevakadzi. Ichokwadi chaizvo vakadzi, panguva ino, ivo ndivo vatengi vakuru vemabhuku uye vanyori vakuru vekuverenga: vakadzi vanotenga kuverenga, kupa sezvipo uye zvevana vavo. Izvi zvinoreva kuti kunongedza vanhukadzi mumisangano yekushambadzira yezvinyorwa kunotengesa zvakanyanya nekuti vakadzi vanotenga zvimwe. Izvi zvinoita kuti itotarise macover anonyanya kukwezva kune vakadzi.
Zvinoreva here kuti mabhuku kuratidzwa kwechikadzi mutsika? Zvirokwazvo kwete, zvazvinoreva chaizvo ndizvozvo kushambadzira kwemabhuku uye chero chimwe chigadzirwa inotaura kuboka revatengi yakakura nekuti iri uko kudyara kunowedzerwa mukushambadza.
Zvinonaka maererano nechikadzi
Tinogona kufunga kuti zvinyorwa zvevakadzi ndizvo iyo inonyanya kuverenga vakadzi.
Pachivanhu pane mabhuku anodiwa nevakadzi zvakanyanya uye mamwe anofarirwa nevarume. Ichokwadi. Izvi zvingafungidzira kuti mabhuku anonyanya kuverengerwa nevanhukadzi ndeemunhukadzi uye neakajairwa kuverengerwa nevarume echirume, asi pachinzvimbo haataure nezvemabhuku echirume, saka tinonzwisisa kuti iro rechikadzi chiratidzo harirevi izvi nekuti zvido hazvisi zvega , Huzhinji hahupatsanure uye kubatana mukuravira hakupo.
Mamiriro ezvinhu akafanana aizoitika nemitambo; kana nebhaisikopo, asi, kunyangwe paine chirevo chekuti vakadzi vakaita senge comedies nevarume vakaita semafirimu ekuita, hatimbonzwa mukadzi wechikadzi movie. Sei? Isu tinodzokera kune yekushambadzira nyaya: kuverenga chiito chega, cinema kune rimwe divi ndewemagariro. Isu tinoenda kumamuvhi sevanhu vaviri, semhuri kana neshamwari, semutemo wese. Maitiro ekuronga kusabvisa, hapana mugadziri ane hanya nezvekuti yavo firimu iratidzwe semurume kana munhukadzi. Uye isu tadzokera kunhau yekutengesa.
Ndivo mabasa akanyorwa nevakadzi vechikadzi uye akanyorwa nevarume vechirume? Zviri pachena kuti nharo inowira pasi pehuremu hwayo, asi isu hatifanire kumira kuiongorora.
Nekuderedza kune zvisina musoro, nharo imwecheteyo inogona kushandiswa pakunyora zvichienderana nerudzi rwemunyori kana zvebondePane chero munhu anofungidzira kutaura kuti Lorca akanyora zvinyorwa zvegayari? Uye zvakadiniko nemabhuku mazhinji kudaro akanyorwa pasi pezita rekunyepedzera? Vese vachiri kuyaruka vakasungirirwa pana Harry Potter achiverenga zvinyorwa zvevakadzi?
Izvi zviri pachena kuti hazvisi izvo zvinorehwa nechiratidzo.
Zvinyorwa ne protagonist
Kunge sarudzo yapfuura, kurongwa uku kwaizotitungamira kumhedziso dzakadai sedzakadai Vakadzi vadiki, Luise May Ascott, mabhuku evakadzi kana kuti Mark Twain akanyora zvinyorwa zvevarume paakasika Tom Sawyer o Huckelberry finn, kana kuti Günter Grass akagadzira mabhuku evana El Tin Dhiramu nekuti protagonist aive mwana.
Zvinyorwa chiratidzo chetsika yekunakidzwa kwemunhu.
Ndakawana zvinzvimbo zvinodzivirira kuti zvinyorwa zvevakadzi ndizvo zvirimo themes, mumaziso ake, wechikadzi, senge kuberekwa, kubvisa nhumbu, kushaya mbereko, kushungurudzwa, kurwira kutsvaga nzvimbo munyika yebhizinesi kana zvematongerwo enyika. Kupatsanura madingindira aya semukadzi kunoda zvinopfuura chinyorwa chinyorwa cheanthropology. Vari magariro uye nyaya dzevanhu. Sosaiti inochinja uye madingindira akafumiswa. Kusvika parizvino zviitiko izvi zvave kusaririra mumabhuku, kana kunyangwe muzvinyorwa zvepamusoro, kana zviri zviitiko zvakadzika midzi mukudzika kwemunhu, sezvazvaivewo kwemazana emakore, semuenzaniso, rusarura. Zvinyorwa ndeye kuratidzwa kwekushushikana kwenzanga kwenguva yacho. Iyi misoro, kure nekuva nemurume, kumutsa zvisikwa zvepasirese, zvakajairika kuvarume nevakadzi, vanosvika pamabhuku zvakawandisa pamwe nekumwe kunonoka panguva imwechete sezvinobuda misoro mitsva, seiya yakapihwa nemireniyamu, semuenzaniso, kuti kupfumisa nekumutsiridza mabhuku. Kuenderera mberi nemuenzaniso wemu cinema, kuisikidza madingindira aya sevakadzi kwaizotara yakawanda yeAlmodóvar's filmography seyechikadzi, iyo inovandudza mashoma mashoma ekunyunyuta nezvehukama.
Panguva ino, ndinogona kungogumisa izvozvo zvinyorwa, senge yakasara tsika, ndeyepasirese, hapana murume kana murume, kunyangwe kana kuravira kwekunyorera kuchititungamira mukuvhiringidza kupatsanurwa, uko kune vamwe hakuna musoro uye kuti avo vanokuwana havabvumirane pane zvavanoreva.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Nhoroondo yezvinyorwa » Mhando yetsika: Zvinyorwa zvevakadzi zviripo here? Uye murume?
Mhuka dzinonakidza uye kwadzingavawana